Diovy ny rafitray | Avy amin'ny Linux
Diovy ny rafitray
Iray amin'ireo tombony anasana antsika hampiasaina GNU / Linux dia hoe tsy feno fako io, satria tsy marina io, ny mahasamihafa azy dia tsy mampiadana ny rafitra ity fako ity, na farafaharatsiny toa tsy nitranga tamin'ny solosainako izany, fa na eo aza izany dia tiako ny manadio isaky ny matetika ary avy eo mizara izay ataoko.
Ny tanjon'ity programa ity dia ny fampisehoana ireo fonosana izay TSY mbola napetraka ho fiankinan-doha, ary haseho lisitra iray mampiseho ireo fonosana "voatana".
Tsotra ny fampiasana azy, raha vao mihazakazaka voalohany isika dia hametraka fanontaniana maromaro momba ireo fonosana napetraka.
Azontsika atao ny misafidy hitazona ilay fonosana (hotsaroana amin'ny debfoster) na afaka misafidy ny hamafa azy isika.
Raha amin'ny fotoana hamaliana ny iray amin'ireo fanontaniana dia manana fanontaniana momba ilay fonosana isika dia afaka manoratra "?" afaka mijery vaovao momba an'io.
Raha ny amiko dia be dia be ny fanontaniana matotra momba ny fonosana izay tokony na tsy tokony hesoriko
Ity fonosana ity dia mamokatra lisitry ny fonosana kamboty ao amin'ny rafitra. Amin'ny alàlan'ny fonosana kamboty dia takatray ireo trano famakiam-boky izay tsy ilaina intsony, izany hoe tsy misy fonosana napetraka dia manondro azy io ho fiankinan-doha. Nefa… tandremo ireo programa natambatra avy amin'ny loharanom-baovao (miaraka amina fametrahana na fanaraha-maso) satria tsy voafehy ny fiankinan-dry zareo, noho izany fa mety hiteraka tsy fetezana kely isika.
Una safidy mahaliana dia –Libdev, izay mamorona lisitra miaraka amin'ireo tranombokim-pampandrosoana (mifarana amin'ny -dev) izay tsy ilaina.
Raha hijery ireo fonosana kamboty dia alefaso fotsiny ny baiko
Azo atao izany apt-get vakio ny lisitry ny fonosana vokarin'i deborphan:
Ny safidy –purge araka ny efa fantatsika dia manala ireo fisie fonosana fonosana.
Ho an'ireo tia konsolosy kely dia afaka mametraka gtkorphan isika, izay mora indrindra sy intuitive graphique ho an'ny deborphan.
Amin'ny famafana ireo fisie fikirakirana dia manafaka toerana ao amin'ny kapila misy antsika (na ho ela na ho haingana dia sarobidy tokoa) ary mitazona ny fahadiovan'ny lahatahiry / sns. Amin'ity baiko manaraka ity dia azontsika atao ny mamafa ny fisie fikirakira izay efa nafoin'ireo fonosana nesorina tsy nisy ny safidy –purge.
Hamafana ny cache amin'ireo rindrambaiko napetraka:
Manadio fampiharana tsy voafafa
Fiankinan-doha azo atao amin'ny fampiharana nesorina:
Esory ny voanjo taloha
Tsy maintsy fantarintsika aloha hoe inona ireo kinova kernel napetraka tao amin'ny rafitray.
Raha vantany vao manamarika isika dia esorinay (hamafana ireo rakitra fikirakirana) ireo voan-javatra tsy ilaina
Aiza no tsy maintsy soloantsika ny "X" amin'ny kinova kernel izay tianay esorina.
Mariho fa ny hery superuser ihany no ilaintsika mba hanaisotra ny voan-javatra fa tsy hikarohana azy ireo.
Imbetsaka amin'ny fampidirana ireo tahiry PPA ao Ubuntu dia miafara amin'ny rafitra tsy miovaova isika, misy lesoka fiankinan-doha na mila fotoana maharitra hikarohana ireo fanavaozana rehetra miseho.
Vahaolana iray dia ny fanadiovana ireo toerana fitahirizana ao amin'io lisitra io izay manome olana na lany andro.
Amin'ity baiko ity dia mamorona rakitra an-tsoratra miaraka amin'ny lisitra feno izahay.
ppa-purge dia script iray manala mora foana ny fidirana tahiry toy izany sy ny lakilem-bahoaka. Ny tombony iray hafa amin'ny script dia ny programa izay hapetrakay amin'ireo tahiry ireo, ny script ihany no miandraikitra ny fanandramana manolo ny fonosana amin'ireo izay mifandraika aminy avy amin'ny kitapom-bolan'ny Ubuntu ofisialy. Isaky ny azo atao.
Hatramin'ny Ubuntu 10.10 dia azo alaina amin'ny fametrahana avy amin'ny toeram-pivarotana ofisialy.
Raha hampiasa azy io dia manana ao amin'ny fisie .txt izay hamokarantsika ireto manaraka ireto
Ny mahaliana antsika dia ny mamafa ny "wrinkliez / ppasearch"
Nieritreritra ny hanampy localepurge aho, saingy efa ao anatin'ity rohy manaraka ity
Ity no ampiasako matetika, rindran-tsary tsy ampiasaiko, nampiasa tweak ubuntu taloha aho fa tsy intsony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Diovy ny rafitray
gtkorphan hanao an-tsary
pd: dpkg –purge `COLUMNS = 300 dpkg -l | egrep "^ rc" | manapaka -d '' -f3` dia manome ahy hadisoana amin'ny debian wheezy
dpkg: hadisoana: –ny làlan'ny fihodinana dia mitaky anarana fonosana iray farafahakeliny
Soraty ny dpkg –fandraisana fanampiana hanampy amin'ny fametahana sy famongorana fonosana [*];
Mampiasà `dselect 'na` aptitude' ho an'ny fitantanana fonosana tsara kokoa;
Soraty dpkg -Mangataha lisitry ny fikirana debugging ho an'ny dpkg;
Soraty ny dpkg –force-help amin'ny lisitry ny safidy hanery ny zavatra;
Soraty ny dpkg-deb –help raha mila fanampiana amin'ny fanodikodinana rakitra .deb;
Ao amin'ny NAS miaraka amin'i debian dia nanana traikefa ratsy tamin'ny fitaovana fanadiovana aho, apetrako fotsiny ny localepurge ary hampiasa fahaizana hanadio ireo fiankinan-doha tsy ampiasaina ary amin'ny chakra dia ampiasaiko pacman ho an'ny fiankinan-doha ary ho an'ny ambiny miaraka amin'ilay programa izay itondran'ny distro antsoina hoe Sweeper.
JackassBQ dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara. Misaotra betsaka.
Valiny amin'i JackassBQ
Ary BleachBit? Afaka mitantana izany aho. Na dia ny marina aza dia tsy nanadio nandritra ny telo volana aho ary mbola mandeha tsara, tsy hitako fa miadana kokoa izy io.
Izay no hotononiko anarana. Miaraka amin'ny BleachBit, tohanan'ny Filelight hanara-maso ny haben'ny kapila samihafa, mitantana tsara aho.
Ny lahatahiry samihafa dia te hilaza ... fa nihinana teny iray aho ...
Ho an'ny tsiriko, BleachBit no "mampidi-doza indrindra" amin'ny rehetra, tsy maintsy fantatrao izay holazaina eny sy tsia, satria hitako fa rehefa avy nampiasa azy io sy nanisy antsipiriany azy dia mijanona ho tsy azo ampiasaina ireo rafitra ... vokany ... endrika ary apetaho aotra.
Pin dia hoy izy:
Tsara ny nanazava fa ireo dingana rehetra ireo dia ho an'ny Debian na fizarana fizarana ...
Mamaly an'i Pin
raha vantany vao mamaky aho dia tsy maintsy… Tsy namaky intsony aho.
Haha izaho koa. Mandainga, novakiako io fa misy tsatoka ao an-tsaiko milaza amiko mba tsy hamaky intsony.
Mitandrema amin'ny tsatoka ary bebe kokoa raha arbamp ianao… hehehe 🙂 Ny fahalalana ny mampitaha dia mandresy ary manana tohan-kevitra tsara kokoa. Izany no lazain'ny hendry (ary mino azy ireo aho).
Inona no tsy mety amin'ny maha-Arch-Vamp anao? * Manala ireo vazivazy *
Tsy nahalala vaovao vaovao ianao hifaneraserana amin'ny Suse anao ary avy eo mifamaly ... satria na tsy ampiasainao na izaho na ianao dia tsy maintsy fantatra izany, (ny hevitro manokana momba anao).
Ka diso be dia be ny fampahalalana nataoko, isaky ny mahita aho / avy / amin'ny debian, mandalo aho. 😛
Koratsuki dia hoy izy:
Voamarika tamin'ny isa azoko. Mlay!
Valiny tamin'i Koratsuki
Mlay? Tsy mbola namaky izany aho. Tsianjery hehe.
m dia hoy izy:
"Ny iray amin'ireo tombontsoa izay anasana antsika hampiasa GNU / Linux dia ny tsy famenoana fako azy, satria tsy marina io,"
Ity ankapobeny ity dia DISO MAOTRA ary mety hitarika ireo mpampiasa vaovao an'ny GNU / Linux hanana hevitra diso momba ny rafitra fiasa.
Tokony hazavainao fa ny olana lazainao dia mifandraika manokana amin'ny rafitra DEBIAN sy NY FIVAROTANAO satria tao amin'ny distro izay ampiasaiko indray mandeha monja dia nahita fonosana kamboty telo aho ary izany dia nitranga satria nitazona ny tanako tamin'ny rafitra aho.
Toy izany koa, ny teny hoe "GARBAGE" dia toa diso aho raha miresaka rakitra izay ANJARA AMIN'NY SISTEMA MIASA toy ny hazo, boky ary rakitra amin'ny fiteny sns.
Ny fako dia hita ao amin'ny rezistra Windows satria mahazatra ny fampiharana tsy dia voalamina tsara ny mamela ny soritry ny fandalovany amin'ny alàlan'ny rafitra rehefa esorina; koa ny olan'ny rafitra intrinsika, ny fahatapahana tampoka ary maninona tsy ny malware no manimba ny rezistra.
Na dia tsy misy olana aza ny GNU / Linux, dia azo inoana fa tsy ho tafiditra amin'ny fametrahana na rindranasa tapaka noho ny antony tsy fantatra.
Heveriko fa ity lahatsoratra tsy misy dikany ity dia TSY MISY misy fiantraikany amin'ny fahatsapana fa mety misy mpampiasa nobel na tsy GNU / Linux manana an'io rafitra io.
Farafaharatsiny farafaharatsiny, ilaina ny mamaritra an'ity tranga manokana resahina momba an'i Debian GNU / Linux ity.
Ny Newbies dia mahatakatra tsara kokoa ny teny GARBAGE ... satria amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny W $ izy ireo izay misy be dia be ary moka. Mila miresaka amin'ny olona vaovao ianao miaraka amin'ny teny fantany, avy eo "kolokoloinao" izy ireo hanatsara azy ireo ... satria efa ao amin'ny Linux izy ireo ... ary ny fako amin'ny heviny tsara indrindra dia ny vokatry ny fifandraisana izay ny tsara indrindra esorina amin'ny zavatra iray ary misy ambiny antsoina hoe excretion ... tsy maintsy esorina ireo ... satria enta-mavesatra izy ireo, na inona na inona antsoinao hoe rafitra mamorona azy ireo.
Ho an'ny mpanao politika bontolo dia mandeha tsara ianao
Tsy nahatakatra na inona na inona ianao.
Manantena aho fa tsy hianjera amin'ny marika hoe "mpanao politika kabary bontolo" ny tenako, fa manangona fako i Arch; miankina amin'ny mazava ho azy ny tianao holazaina amin'ilay hoe "fako." Ho ahy izay azo ampiasaina hanondro zavatra tsy ilainao, manelingelina fotsiny izany, ary raha tsy mila ny hazo, ny boky torolàlana, na ireo rakitra amin'ny fiteny ianao (afa-tsy ilay ampiasaina, mazava ho azy), avy eo fako.
Eto niresaka momba ny script izy ireo mba hametrahana automatique ny asa fanadiovana sasany ao amin'ny Arch. Farafaharatsiny mba hampandeha ny # pacman -Sc aorian'ny fanavaozana na fanesorana ny programa tsirairay, satria ny cache an'ny rindranasa tsy napetraka dia mety hanana habaka betsaka; ary ny # pacman -Qdt hijerena fonosana kamboty, izay raha ny amiko dia nataoko (taorian'ny volana farany teo) ary nahita 12.
Ary avy eo tsy ianao koa MSX ... efa roa izahay! Te hisotro kafe ve ianao? Ary aleo tsy fenontsika "fako" tadiavin'ny olona ankoatry ny zavatra hafa eto amin'ity pejy ity ny vahaolana fa tsy fampisehoana fahalalana, na hamirapiratra amin'ny ego.
ny zavatra tadiavin'ny olona ankoatry ny zavatra hafa eto amin'ity pejy ity dia ny vahaolana fa tsy fampisehoana fahalalana na famirapiratan-tena.
Amin'ity, mahafinaritra 🙂
Tsy hiala tsiny aho satria mitady ny hatsarana sy miady amin'ny fahalemem-panahy.
Rosa Desktop Fresh dia hoy izy:
Ahoana no hametrahako azy ao amin'ny marika vaovao Linux Linux 2012 Desktop Fresh?
Mamaly an'i Rosa Desktop Fresh
ny mitovy amin'ny ROSA dia urpme -auto-kamboty, fa ... http://blogdrake.net/blog/abagune/como-elimine-paquetes-huerfanos
Hey namana, azonao atao ve ny manisy soa ahy, azonao omena ahy ve ireo sary masina ROSA, nanana azy ireo aho saingy nesoriko tsy nahy izy ireo ary tsy afaka namerina azy ireo aho. Misaotra mialoha.
misintona azy mivantana avy any amin'ny repos rose ary esory ny RPM fotsiny http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012.1/repository/SRPMS/main/updates/rosa-icons-1.0.37-1.src.rpm
Rosa-Linux dia hoy izy:
Mamaly an'i Rosa-Linux
–M | 5 ora lasa izay |
Tsy hiala tsiny aho noho ny fitadiavako ny hatsarana sy ny ady amin'ny fahalemem-panahy.
1 Izay manana kalitao antonony na mahitsy, na somary mahantra: somary tsy misy dikany ny rakikira farany nataon'izy ireo.
2 Izany dia tsy mahaliana na tsy misy lanjany: ny asa vita dia antonony, izany no tsy nahazoany ny loka.
3 Izy io dia mihatra amin'ny olona tsy manan-tsaina na tsy manana fahaiza-manao ampy amin'ilay asa ataony:
Fatrao ny teninao, izaho irery no mangataka aminao fa tsy tianao izany dia tsy midika hoe tsy mahafeno ny fenitry ny tambajotra izany.
Raha tsy manana faharanitan-tsaina ho anao aho dia mila hahafantatra ahy ianao, namolavola ny fizotran'ny famokarana sy ny fitantanan-draharaha aho, niara-niasa tamin'ny famoronana orinasa aho, koa aza milaza hoe tsy manana faharanitan-tsaina aho, aza miafina ao ambadiky ny anarana miafin'ny tambajotra, satria eto amin'ny taniko izay lazaina amin'ny vava, tohanan'ny baolina. Io ihany no zavatra tsy maintsy holazaiko anao.
Jereo Kung Kung, fa tsy feno ny lahatsoratra dia mitranga, fa ny fanaparitahana FUD am-pifaliana kosa tsy.
Mangina AlfFantatsika fa be ny troll amin'ny malalaka, aza sosotra satria araka ny fantatsika, ny tambajotra dia manome làlana ny zavatra tsy zakan'izy ireo.
m, Azafady, tsara raha mandrefy ny teninao ianao satria na dia marina aza ianao (izay tsy midika hoe marina ianao), tsy manome anao ny manafintohina sy manamarika ny fandraisan'anjaran'ireo mpampiasa rehetra ao amin'ny DesdeLinux ho mediocre izany. Raha mieritreritra ianao fa mahavita zavatra tsara kokoa, dia asaina ianao hiara-miasa, nefa minoa ahy, eto ny lahatsoratra izay toa tsy dia misy dikany na tsy dia misy dikany aminao, dia omenay lanja azy ho tsara indrindra satria mampianatra antsika zavatra foana.
Fiaraha-miasa fandriampahalemana sy fitiavana ..
Tsy manao trolling aho. Mazava ho azy fa lehilahy maotina sy mahery setra ilay tovolahy ary tsy mitaky fanakianana voalaza fa lehilahy fa tsy vehivavy diplomaty.
Rehefa manao zavatra imasom-bahoaka ianao dia * Ataonao amin'ny besinimaro *.
msx, "Io lehilahy io" araka ny filazanao fa mety amin'izay tadiavinao, mety ho jadona na zanaka lehibe indrindra eto an-tany aza izy, ny tiana holazaina dia hoe tena ratsy tarehy (ary tena mora) ny manafintohina rehefa miafina ao ambadiky ny nick isika ary manana solosaina ho endrika fifanakalozana isika. Ary "ilay bandy" toa anao na mpampiasa hafa ao amin'ny DesdeLinux, dia tsy maintsy hajaina.
Ny tena marina fa zavatra "ampahibemaso" io dia fomba iray hahatratrarana olona maro kokoa, ary raha manao fahadisoana amin'ny zavatra nosoratany sy navoakany i Alf na ny mpampiasa azy dia mazava ho azy fa azo ahitsy izy nefa amin'ny fomba marina. Tsy mahita zavatra tsy misy dikany aho ao amin'ny lahatsoratranao, minoa ahy fa nahita zavatra tsy dia lehibe loatra aho izay tonga tao an-tsain'ireo olona "manan-danja kokoa" miteny ara-tsosialy.
Azafady, avelao izao ity lohahevitra ity. Mangataka fotsiny aho mba hisy fanajana ny mpampiasa rehetra, satria nampiavaka ny tenanay foana ho toy izany hatrizay nanombohan'ny DesdeLinux.
Salama, Alf. Tiako ny lahatsoratranao satria nianatra zavatra vaovao tao amin'ny Linux izay tsy fantatro aho.
Tsy haiko hoe iza no valianao amin'ity fanehoan-kevitra ity, fa "namporisihina" (nanentana) hanoratra izany aminao aho satria hitako fa mampiasa ny rakibolana ianao. Ho ahy manokana, te-hanondro lesoka fotsiny aho ao amin'ny fehintsoratra voalohany, izay ampiasanao diso ny teny hoe "mamporisika".
"Mamporisika" dia tsy midika hoe "miadana". Fahadisoana mahazatra be ity. Ho an'izay dia "miadana" isika. Noho izany, ao amin'ny Linux dia manana tombony isika fa milamina ny rafitra ary tsy miadana toa izay mitranga amin'ny Windows.
: trolling: Tokony hampiadana ny ekipany amin'ny baolina kitra izy! xD: / trolling:
Carlos-Xfce, marihiko ny fanitsiana nataonao, raha tadidiko tsara dia efa nataonao tamiko tamina lahatsoratra hafa ity, saingy manana faharatsiana amin'ny teny maro aho, ratsy tarehy somary sarotra ny manitsy.
elav, minoa ahy tsy hanelingelina ahy, sarotra be amiko ny tezitra, fombako miteny ihany io, nokapohina mafy, izany no antony anoratako kely, mirona ho diso fandray aho.
Salama, Alf. Aza manahy momba ny lesoka - manao azy rehetra isika, ara-dalàna izany. Tsy lavorary ny fitenin'olombelona, ​​tsy misy koa ny olombelona, ​​ka misy foana ny lesoka. Ny zava-dehibe dia ny mianatra mba tsy hianjera amin'ny lesoka indray.
Ny verbe "miadana" dia tsy fantatry ny olona maro. Tsy anisan'ny andavanandrom-piainan'ny olona io fihetsika io, toy ny "hafainganana" sy ny fomba fanapahana ny hetsika toy izany: "ajanony", "ajanona", "ajanona". Miaraka amin'ny "miadana", misy koa ny "miadana" ary "miadana." Ity endriny farany ity dia teny niavosa ihany koa ho antsika "ny famporisihana" diso.
Ary eny, heveriko fa efa nanitsy zavatra teo aho. Misaotra tamin'ny lahatsoratrao; izy ireo dia fitaovana hianarana zavatra mahaliana izay tsy fantatrao taloha. Manantena aho fa hamaky anao indray tsy ho ela. Salama.
Ny olona amin'ny ankapobeny dia miteny ratsy, angamba satria saika tsy misy mamaky ary raha manao izany dia voafetra amin'ny lohahevitra manokana iray izay ahitany voambolana mitovy ihany ary matetika mamintina ny dikan'ny teny izay tsy fantany araka ny sahan-kevitra fa tsy mankany jereo ny mataburros satria manome asa be ho azy ireo izany.
Ny sasany amin'ireo barbarity henoko isan'andro dia ny "Raha nanam-potoana aho, dia nanao izany!" ... TSY FANAMBADIANA, TSY MAINTSY HAMPIASAANA AMIN'NY TENSE VERBAL hafa, raha manana na manam-potoana ianao dia manadala.
Na ohatra rehefa mampiasa "mifampijery" sy "mijery", "mandre" ary "mihaino" izy ireo.
Tsy milaza izany aho noho ny @Alf, na iza na iza manana slip, amin'ny ankapobeny manelingelina be ny hoe mila mampiasa fiteny notsorina mba hahatakarany anao na handrenesana zavatra tsy misy dikany toa ny hoe "inona no mitranga dia sarotra ny miteny anao" izay valiako matetika " Tsy miteny sarotra na sarotra aho, miteny amin'ny fiteny espaniola Rio de la Plata Espaniôla, ny olanao dia ny tsy fanananao voambolana, efa nanandrana nanokatra boky ve ianao mba hahitanao izay hitanao na hanatontosanao ny rakibolana mba hahitanao akory ny momba azy? ”
Mihomehy ny sasany hiaiky fa nilaza zavatra tsy misy dikany izy ireo (ny vitsivitsy, mazava ho azy fa tiako izy ireo) ary ny ankamaroany dia faly, tezitra ary sosotra, mahafinaritra be ny mahita azy ireo.
sjah dia hoy izy:
Rehefa avy namaky ny hevitry ny "msx", mampiala voly - avelao holazaina -, azonao atao ny manampy:
1. Manao lesoka amin'ny tsipelina ianao, lesoka sintaktika ary, raha ny momba ny firafitra semantisma dia tsy eo amin'ny lala-mahitsy ianao.
2. Hitako ity fidirana ity satria nitady fomba hafa hanafoanana ireo junk files aho. Eny: "fako." Tsy miasa ho ahy izy ireo, tsy ampiasaiko, mandray toerana disk izy ireo ary mamafa azy ireo dia tsy miteraka olana amin'ny OS-ko; Fa ny mifanohitra tanteraka no izy.
Avy eo, taorian'ny lesona be dia be momba ny "hatsarana" nambara tsy nisy ohatra, rehefa samy manana ny BIN ny Windows sy ny kinova maro miorina amin'ny Debian, ny baiko toa ny CLEAN na ny sary miendrika BROOM, sns. Dia tsara kokoa ny mifikitra amina script iray, iray izay soso-kevitro fotsiny → misaotra ny fandraisana anjara na ny fandraisana anjara ary atsaharo ny "excéliciement".
Mamaly an'i sjah
Mamaly an'i matias
TEST dia hoy izy:
Valiny amin'ny TEST
Manana debian stable jessie aho) miaraka amin'i lxde ary nampiasa debfoster aho mamaly eny saiky ny zava-drehetra
ary nesoriny ny antsasaky ny rafitra, fonosana maro: lalao, fampiharana, fitaovana. Ny "debian" -ko dia "voaravaka". Nihevitra aho fa hitandrina izany rehetra izany ary hanafoana azy ireo. Talohan'ny nampiasako ny deborphan sy deborphan-gtk imbetsaka mandra-pivoakan'ny fonosana ary nilamina ny zava-drehetra.
nanao zavatra tsy nety ve aho?
[Torohevitra] MySQL diso loatra ny fifandraisana, voavaha
Desktop Linuxero tsara indrindra: Janoary 2013